Fanentanana An-Tserasera Ho Fikarohana Ireo Mpanoratra Tononkalo Tany Am-ponja Tsy Fanta-Tompo Nandritra Ny Fitondrana Jadona Tany Arzantina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2016 13:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Deutsch, 日本語, English
Nanamarika ny vanim-potoana maizina tamin'ny tantaran'ny Arzantina ny Ady Maloto nandritra ny taona 1974 ka hatramin'ny 1983 izay namoizana ain'olona teo ho eo amin'ny 30.000 teo. An'aliny ny olon-tsotra no nalaina an-keriny, nogadraina, nampijalijalina, ary novonoina. Niharan'ny habibian'ny andiana miaramila mpamono olona avokoa ireo izay rehetra naneho ny tsy fitovian-kevitra na dia ny kely indrindra tamin'ny didy jadon'ny elatra havanana – na mpiasa, na mpianatra, mpampianatra, mpanao gazety, na mpikatroka.
Nandray olom-pirenena Arzantina ireo foibe famonjana an-tsokosoko manerana ny firenena. Ny fonjan'i Rawson, fonja mitokana voambina indrindra ao amin'ny faritanin'ny Chubut, no iray amin'ireo toerana tena hipoka indrindra. Gadra politika teo ho eo amin'ny 10.000 ka hatramin'ny 12.000 teo no nandalo tao Rawson ny 1975 ka hatramin'ny 1984. Nilaza izany ho toby fitanana ara-dalàna ireo gadra teo aloha izay niaina famonjana tao .
Navoaka ireo tononkalo ankehitriny 40 taona taorian'ny fanonganam-panjakana. Nisy mpihaino ihany ny farany ny feon'ireo mpanoratra , kanefa tsy mbola manana anarana izy ireo. Nandefa ny #CuadernodeRawson (kahie Rawson) fanentanana hitadiavana ireo mpanoratra ôrizinaly ny Cosecha Roja (Voa Mena), tambajotra ara-dalànan'ny fanaovan-gazety sady fikambanana mpiaro ny zon'olombelona.